Deepin v20 ichave imwe yenzvimbo dzinoyevedza graphic iripo | Linux Vakapindwa muropa
Kana isu tichida kushandisa Windows kana macOS, sarudzo dzekugadzirisa dzinenge dziri shoma. Sekuudzwa kwandakaitwa nemurairidzi wangu, "muLinux unogona kushandura zvese", zvekuti kunyatso shandura mufananidzo wedesktop redu rava murairo kure. Ini pachangu, ndiri kufara kwazvo nezvose zvinopihwa ne KDE (Plasma), asi Yakadzika v20, inotevera vhezheni yeChinese graphical nharaunda, inotaridzika zvakanaka kwazvo zvinoita kuti ndifunge.
Mukati mevhiki rino, iyo Deepin Linux YouTube chiteshi yakaburitsa vhidhiyo matinogona kuona Deepin v20 Launcher, inova chikamu chete chehurongwa hwekushandisa iyo ichaburitswa muna Zvita kana kuti yatove muna 2020. Sezvauri kuona, mufananidzo wacho hauna kufanana. chero chinhu chatakamboona panguva imwe chete icho chatinoziva. Rinoyeuchidza zvishoma zvemacOSKunyangwe iyo yepasi pani isiri chimwe chinhu chavaizogadzira muCupertino.
Deepin v20 ichavhura beta munaNovember
Del app kuvhura Zvinotokatyamadza kuti pane zvitatu zviripo zvinooneka: a classic pani, imwe umo maapplication akarongedzwa nemaarufabheti uye imwe yakafanana neyechipiri mairi ari nezvikamu izvo isu zvatinowana kubva kune akasiyana mifananidzo (network, mimhanzi, mitambo, nezvimwewo).
Yakave iripo kwemwedzi mishoma Yakadzika Linux 15.11, yazvino vhezheni yakauya nenhau dzinonakidza senge syncing marongero mugore (Cloud Sync), asi shanduro dzinoburitswa kubva muna 2020 dzichatonyanya kutaridzika. Nhanho yepedyo ichave munaNovember, panoburitswa Deepin v20 muchimiro cheiyo beta vhezheni. Kubva pane izvo zvinoita, vagadziri veDepin vachasanganisira mazhinji enhau dzakapihwa gore rino mune inotevera vhezheni ye Deepin Linux.
Deepin haisi chete inoshanda system. Zvakare inowanikwa muchimiro chemamiriro ekunze, seGNOME, Plasma, MATE, kana Pantheon. Kana iwe uchifarira kuyiyedza, uye sekune chero imwe nharaunda kana inoshanda sisitimu, yakanakisa ndeye dhawunorodha Deepin Linux uye uyedze mumushini chaiwo. GNOME Mabhokisi anotibvumidza kumhanya iyo mifananidzo muLive Session pasina kuisa system yekushandisa uye pasina kuona hwindo diki senge muVirtualBox. Kutendeseka, ndinofunga chimwe chinhu chakakodzera icho, kunyangwe kana chiri chekungoedza chete. Uye ndiani anoziva, inogona kuve yako yaunofarira Linux sarudzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Deepin v20 ichave imwe yenzvimbo dzinoyevedza dzemifananidzo dzatakaona
Zvakadzika. Iyo haina chinhu chakakosha, iko kusakura kwakanyanya kweLinux, haina zvakawanda kuve padanho reKDE
Hahaha deepin clown iri pamusoro kde munzira dzese kde yakagara muzana ramakore rapfuura nedesktop rake rakapetana uye risingaenzanisike
kde ndiyo yakanakisa desktop desktop ine makore echiitiko, ndiyo nharaunda inogadziriswa zvakanyanya, uye yakajeka uye yakagadzikana.
deepin haasati akura ane madhigi,
Alvaro Poblete akadaro
Pachokwadi uye ndakaisa Deepin 15.10 uye 15.11 pane akati wandei makomputa evatengi asingabatwe nekombuta, hapana akambondibvunza kuti ndiise windows.
Iyo yakanaka, inokurumidza, inoshanda kwazvo mushe-mashoma macomputer, yakanyanyisa mvura, chaizvo iyo imwecheteyo software yaungashandisa pa windows.
Ini ndinofunga maChinese aya ari munzira chaiyo, vachifunga nezvevashandisi veeophyte uye kwete vanhu vakadzidziswa chete.
Pindura kuna vlvaro Poblete
Theorino Eloyito akadaro
José, kugadzirisa: *
Pindura Teorino Eloyito
Ngirozi Correa akadaro
Kana iwe urikutaura nezve kuva nezvimwe zvingasarudzika zvemamiriro enharaunda: zano ndere kuongorora uye kuona izvo zvitsva kusiya zvimwe zvinhu izvo «zvinotipa isu» kana pamwe izvo zvatinoda
Pindura kuna Angel Correa
ndinoikanda kupi .... maita basa